लसुन | Ratopati
यस्ता रोगबाट बच्न बिहान खाली पेटमा लसुन access_timeपुस १८, २०७७
एजेन्सी – नेपाली खानाको स्वाद बढाउनका लागि लसुनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । लसुनको पातदेखि यसको केस्रासमेतले तरकारीको स्वाद बढाइदिन्छ । यसको सुगन्धले समेत तरकारीलाई थप स्वादिष्ट बनाउँछ । लसुनमा पाइने एलिसन र एजोइन साथै आर्गोसल्फर यौगिकका कारण शरीरालाई मजबुत बनाउँ...
अब हरेक दिन खानुस् लसुन access_timeपुस ११, २०७७
एजेन्सी । काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा चिसो बढ्न थालेको छ । चिसोका कारण विभिन्न समस्याले सताउन थालेको छ । चिसोमा आउने विभिन्न समस्याबाट बच्नका लागि खानामा हरेक दिन एउटा पोलेको लसुन खाने गर्नुपर्छ । यसले चिसो, रुघाखोकी, ज्वरो तथा अन्य चिसोका कारण हुने समस्याहरुबाट बचाउ...
बिहान खाली पेटमा लसुन, कसरी खाने ? access_timeमंसिर २, २०७७
मुटु र कलेजोलाई स्वस्थ राख्न लसुन, अन्य फाइदाहरु access_timeकात्तिक २१, २०७७
एजेन्सी – तरकारीलाई बास्ना दिन र स्वादिष्ट बनाउन लसुनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भोजनको स्वाद बढाउनका साथै औषधिय गुण पनि हुने भएकाले यसको महत्व निकै धेरै हुने गर्छ । लसुन एन्टिअक्सिडेन्टले भरपुर हुन्छ । लसुनमा भिटामिन सी, बी–६, म्याग्निज र सेलेनियम जस्ता पोषक ...
बिहानै खाली पेटमा खानुस् २ वा ४ केस्रा काँचो लसुन ! access_timeसाउन १७, २०७७
लसुनले थुप्रै रोगहरुबाट बचाउँछ । बिहान सबेरै लसुनको सेवन गुणकारी मानिन्छ । खाली पेटमा दुई वा चार केस्रा लसुनको सेवनले मधुमेह, जोर्नी दुखाई जस्ता समस्यामा आराम हुन्छ । यतिमात्र होइन लसुनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्छ । लसुनमा थुप्रै गुणहरु हुन्छन्...
प्याज सस्तियो, लसुनको कारोबार ठप्प access_timeफागुन २, २०७६
केही दिनदेखि प्याजको भाउ घटेको छ भने लसुनको भाउ उच्च हुँदा कारोबार नै ठप्प भएको छ । भारतीय बजारबाट प्याज आउन थालेसँगै उपत्यकाका बजारमा प्याजको भाउ घटेको हो । गत असोजदेखि महँगिएर मङ्सिरमा थोकमै १८० रुपियाँ पुगेको प्याजको मूल्य अहिले घटेर ७३ रुपियाँमा थोकमा कारोब...
बिहानै खाली पेटमा चार केस्रा लसुन access_timeमाघ २६, २०७६
आकाशियो लसुनको भाउ, प्रतिकिलो २०० ले बढ्यो access_timeमाघ २१, २०७६
सरकारले नेपाल–चीन सिमाना बन्द गर्दा उत्तरी छिमेकबाट आयात हुने लसुनको आयातमा कमी आउनुका साथै यसको मूल्य पनि आकाशिएको छ । काठमाडौंमा लसुनको मूल्य प्रतिकिलो रू. २०० ले बढेको छ । काठमाडौंको बजारमा पुसको तेस्रो सातासम्म प्रतिकिलो रू. २५० रहेको सुकेको ...